Badbaadada Dadweynaha - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Badbaadada Dadweynaha
Waaxda Ganacsiga waxaa ka go'an inay dhisto bulshooyin xooggan si ay u taageeraan ganacsiyada guuleysta iyo qoysaska isku filan. Xoojinta bulshooyinka ayaa udub dhexaad u ah shaqadayada. Bulshooyinka xooggan waa inay noqdaan beelo nabdoon. Waaxda Ganacsigu waxay si wada jir ah ula shaqaysaa wakaaladaha maxalliga ah iyo kuwa gobolka, saraakiisha caafimaadka dadweynaha, sharci fulinta, ururada bulshada iyo xubnaha bulshada ee gaarka ah si wax looga qabto saamaynta dembiga, ku-xadgudubka mukhaadaraadka iyo rabshadaha si loo fududeeyo helitaanka fursadaha iyo ilaha bulshada gobolka oo dhan.
Xafiiska Badbaadada Hubka iyo Ka -hortagga Rabshadaha iyo barnaamijyada ku jira Qaybta Badbaadada Dadweynaha waxaa loogu talagalay inay yareeyaan rabshadaha, kor u qaadaan nabadgelyada dadweynaha, iyo inay hagaajiyaan natiijooyinka bulshada iyo caafimaadka ee bulshooyinka daafaha Washington. Barnaamijyadan, Ganacsigu wuxuu mudnaanta siinayaa maalgelinta bulshooyinka aan u adeegin, taariikh ahaan danyarta ah iyo bulshooyinka nugul, wuxuu dhisaa awoodda bulshada iyada oo loo marayo ka -qaybgal, wacyigelin iyo kaalmo farsamo, wuxuuna adeegsadaa xogta ay ansixiyeen la -hawlgalayaasheena bulshada si loogu wargeliyo go'aannada maalgelinta.
In ka yar Qalabka Dilka RFP
Riix halkan si aad u soo dejiso RFP, fiiri Q&A dokumentiga iyo macluumaadka kale ee khuseeya. Waraaqaha ujeeddada ayaa ah Sebtember 29, 2021; soo jeedinnadu waa Oktoobar 15, 2021
Amarada Ilaalinta Khatarta Ba'an - Gobolka Washington
Ka -hortagga Is -dilka Washington
Isbaheysiga Carruurta Nabdoon ee Gobolka Washington
Xeerka Hubka Su’aalaha la isweydiiyo | Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Gobolka Washington
Harborview Saddex Qalab Wax -ka -qabad: Kaydinta Badbaadada Hubka, Ka -dhaafitaanka Xuquuqda Hubka, iyo Amarka Ilaalinta Halista ee aadka u daran
Xafiiska Badbaadada Hubka & Ka Hortagga Rabshadaha | Qaybta Badbaadada Dadweynaha
Si aad isugu diiwaangeliso cusboonaysiinta nabadgelyada dadweynaha ama si aad u gasho doorbidkaaga macmiilka, fadlan geli macluumaadkaaga xiriirka hoose.
Barnaamijyada Badbaadada Dadweynaha
Xafiiska Badbaadada Hubka iyo Ka Hortagga Rabshadaha
Sharci -dejintu waxay abuurtay Xafiiska Badbaadinta Hubka iyo Ka -hortagga Rabshadaha sannadka 2020 si ay u siiso hoggaanka gobolka oo dhan, isku -duwidda iyo kaalmada farsamo si kor loogu qaado dadaallada wax -ku -oolka ah ee gobolka iyo kuwa maxalliga ah si loo yareeyo dhaawacyada laga hortagi karo iyo dhimashada ka dhalata rabshadaha hubka. Xafiisku wuxuu la shaqeeyaa hay'adaha dawladda, hay'adaha fulinta sharciga, ururrada ku saleysan bulshada iyo shaqsiyaadka iyada oo loo marayo gobolka si loo hirgeliyo siyaasado caddayn ku saleysan, xeelado iyo waxqabadyo si loo yareeyo saameynta rabshadaha hubka ee bulshooyinka Washington.
Barnaamijka Xalinta Muranka Ganacsiga ayaa bixiya maaliyad lagu taageero bixinta adeegyada xallinta khilaafaadka ee gobolka oo dhan. Xarumaha Xallinta Khilaafaadka waxay siiyaan barnaamijyo kala duwan bulshooyinka, oo ay ku jiraan adeegyo war-bixineed oo taageeraya deggenaanshaha guryaha, xasilloonida qoyska, iyo dhaqanka iyo dib-u-soo-celinta bulshada ee diiradda saaraya sinnaanta.
Khayaanada Maaliyadeed iyo Xatooyada Aqoonsiga
Xoogagga Hawlgallada Qiyaanada Maaliyadeed iyo Xatooyada Aqoonsiga ayaa baaraya khiyaanooyinka maaliyadeed iyo kiisaska xatooyada aqoonsiga, iyagoo xoogga saaraya kiisas waaweyn oo ka sii adag, gobollo kala duwan, oo ay ku jiraan tuhmanayaal badan.
Xubnaha Task Force waxaa ka mid ah federaalka, gobolka, degmada, iyo wakiillada fulinta sharciga maxalliga ah iyo baarayaasha warshadaha maaliyadeed oo u heellan wax ka qabashada saamaynta khiyaanada maaliyadeed ee qaybta gaarka loo leeyahay.
Deeqda Caawinta Caddaaladda
Hay'adaha maxalliga ahi waxay maalgelin ka helaan barnaamijka JAG si loo hagaajiyo shaqaynta nidaamka cadaaladda dembiyada iyadoo si gaar ah xoogga loo saarayo xakamaynta maandooriyaha, dambiyada rabshadaha wata iyo dembiilayaasha halista ah. Ujeedadu waa in la bixiyo lacago loogu talagalay barnaamijyada ku dhaca qaybaha soo socda: fulinta sharciga, dacwad qaadista, maxkamadaha, ka hortagga dembiyada iyo waxbarashada, sixitaanka iyo sixitaanka bulshada, daaweynta daroogada iyo fulinta, qorsheynta, qiimeynta, hagaajinta farsamada, dhibanaha dembiyada iyo dadaallada markhaatiga, iyo barnaamijyada caafimaadka maskaxda, oo ay ku jiraan barnaamijyada habdhaqanka iyo kooxaha dhexgalka dhibaatooyinka.